» Markaan ku dhiiraday in aan u sheegto dareenka jaceyl aan u qabo ayaan isku badalay Bukaan.
Markaan ku dhiiraday in aan u sheegto dareenka jaceyl aan u qabo ayaan isku badalay Bukaan.
Oct 28, 2012 - jawaab	Aqrisatay:6163Qisadani oo ah qiso dhab ah ayaa waxa ay ku dhacday Mursal Aadan oo ku magac dheera Dhanaane.
Mursal oo aan muddo isku Iskuul ahayn ayaa jeclaa gabadh, taas oo aan isku aqaanay wada socodkooda, waxaana Mursal ku saa’iday dareen iyo rabitaan jaceyl oo dhab ah.
Jaceylka oo qiyaas ahaan isaga ka tan weynaa hase ahaate Mursal oo mudoba qarsanayay jacylkiisa ayaa sanadii 2011-ka bishii 10-aad ayaa waxa uu ku dhiiraday
in uu jaceylkiisa cadeeysto ama soo bandhigo ileen nin qoyani biyo iskama dhawree.
Mursal ayaa tashi balaaran la sameyay dad ku xeel dheer cudurka aan dawada lahayn ee Aadanaha daashaday dadkuna u yaqanaan jaceylka.
Waxaana lagula taliyay in uu qofta miyirkiisa hanatay u sheegto Jaceylkiisa iyo dareenkiisa caashaq ee dhabka u haya, balse markii uu Mursal u bareeray qoftii uu jeclaa ee uu u sheegtay rabitaankiisa caashaq ayay markiiba ku bilowday in ay aflagaadeyso, islamarkaana dhayalsato dareenka jaceyl ee dulaystay Mursal.
Allow niman wax ogeyn allow ha cadaabin waxaa uu u qaaaday dareen aan la so koobi karin halka ay iyana waxay kula kacday tacadi kii u xumaa dunida oo ah in qofka la yaso waxna laga sheego sinjiyadiisa ama asalkiisi hore waxana filaya in dad badani i fahmayaan madama aan hadlada qaar dul marayo Mursal waxaa da’diisu ahayd 23 jir. waxana uu ku barbaaray magala madaxda sadaxaad ee dalka kismayo.
Warar hoose oo aan helay ayaa sheegaya in intaa kadib Mursal markii gabadhii diiday ay la soo daristay murugo iyo naxadin aan dhamaan.taas oo u horseeday in uu isku badalo bukaan socod ay ka soo hartay aamusnaan iminka waxaa intasi u dheer isla hadal ama qaraw xilyada qaar habeenkii.
Mursal oo iminka isticmaala Telfonka gaar ahaan adega sms ayaan ka codsaday in uu msg iigu so diro qisada wana uu iga yeelay waxana uu ii shegay hadalada kor ku xusan qeybo kamida laakin iminka waa bukaan la dayacay oo midii uu dunida ka calmaday ay ku tacadisay ogoow qofka oo aad si qayaxani u diida waxay keenta xanuun iyo dhibatoyin farabadan hadiibo ay dhacdo in aad qofka la waday wax jaceyl ah u qanci qaabab fara abdan waxana guud ahaan dumarka somaiyed ku waaninayaa in aanay qofka ku liidin tabar daro dhaqaale la’an eeyn uu leyahay sida gacan la’aan il la’aan ama lug’aan waxaba intaa ka daran oo somalida isku liida waxa na daaashaday ee ah qabiil oo ah mida sxbkeen maanta aamusiisya markii ay inantu ku tiri waxaad ka soo jeeda qoys aan i geeynin oo cad hadaba habloow iyo ragow ogaada jaceylka malahan qabiil midib iwm.
W/Q Axmed Maxamuud Jaamac (Shiine)